फेरी तात्यो सरकार : काठमाडौं उपत्यकामा फेरी यस्तो नियम लागु हुँदै – Naya Kura Daily
फेरी तात्यो सरकार : काठमाडौं उपत्यकामा फेरी यस्तो नियम लागु हुँदै
November 7, 2020 189
मन्त्रालयले सङ्क्रमितको निगरानी गर्न प्रत्येक टोलमा ‘सहयोग समूह’ गठन गर्ने भएको छ । पचास घर बराबर सहयोग समूह गठन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ती समूहका ५ देखि ७ जना रहने छन् ।
कोभिड–१९ फोसल पर्सन श्रेष्ठले उक्त समूहले आफ्नो टोलमा रहेका सङ्क्रमित र परिवारको निगरानी गर्ने तथा टे«ेसिङमा परेका व्यक्तिको निगरानी गर्ने छन । “अहिले सङ्क्रमित, टे«सिङमा परेका व्यक्ति बाहिर हिडडुल गर्ने गरेको पाइएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “ अव उक्त समूहले नै ति व्यक्तिको निगरानी गर्ने छन । सङ्क्रमित, टे«सिङ र स्वाब दिएका व्यक्तिलाई केही समस्या परे उक्त समूहले नै हामीसँग मिलेर सहयोग गर्ने छ ।”
Prevमहान श्रीमानले हस्पिटलमै यसरी मनाइदिए अनिताको जन्मदिन ! यस्तो बन्यो माहोल (भिडियो)
Nextपशुपतिनाथले तपाईको रक्षा गरुन, तपाईको यो साता कति शुभ ? – हेर्नुहोस् कार्तिक २३ गते देखी २९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
आफ्नै घरमा हजार-हजारका नक्कली नोट छाप्ने २२ वर्षीय प्रशान्त रंगेहात समातिए